Contractor's All Risks (CAR), Erection All Risks (EAR) - AYA SOMPO Insurance
တည်ဆောက်မှုလုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို
ကန်ထရိုက်တာအလုံးစုံအာမခံ/ တည်ဆောက်မှုအလုံးစုံအာမခံ နှင့် ကာကွယ်ပါ။
ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံ အာမခံ
ကန်ထရိုက်တာ လုပ်ငန်းခွင် အလုံးစုံ အာမခံ သည်
• ရုံးအဆောက်အဦး၊ စက်ရုံ၊ စျေးဝယ်စင်တာနှင့် လူနေအိမ်ခန်းများ​ဆောက်လုပ်စဥ် ကာလအတွင်း သော်လည်းကောင်း၊
• မော်တော်ကားလမ်း၊ မီးရထားလမ်း၊ တံတားများ၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ၊ ဆည်ကာတာများ၊ ရေပိုလွှဲများ၊ လေဆိပ်နှင့် မြေအောက် စျေးဝယ်စင်တာများ ဆောက်လုပ်ဆဲ ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း အကာအကွယ်ပေးနိုင်သော အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံ သည်
• အမျိုးမျိုးသော စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဥ်များ လုပ်ဆောင်စဥ် ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း၊
• စက်ရုံ အလုပ်ရုံများတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ဆောင်စဉ် ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း၊
• တံတားနှင့် သံမဏိတာဝါတိုင်များ စသည်တို့ကို တည်ဆောက်စဥ် ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း အကာအကွယ်ပေးနိုင်သော အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
အကာအကွယ် ရရှိနိုင်မည့် အမျိုးအစားများ
တည်ဆောက်မှု လုပ်ဆောင်နေစဥ်အတွင်း ပေါ်ပေါက်လာသော မည်သည့်ပျက်စီးမှုကိုမဆို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
• အပိုင်း ၁ - ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်း
➣ လုပ်ငန်းခွင်တွင်း အာမခံထားသောပစ္စည်းများ ရုတ်တရက် မမျှော်လင့်ဘဲ ဆုံးရှုံးမှုခြင်း ပျက်စီးခြင်းများအတွက် အကာအကွယ်ပေးပါသည်။
• အပိုင်း ၂ - သူတစ်ပါး ထိခိုက်နစ်နာမှုဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှု
➣ အာမခံထားသူသည် မတော်တဆ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအား ဥပဒေအရ တရားဝင်ပေးဆောင်ရမည့် အချိန်တွင်
က) သူတစ်ပါး ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိခြင်း နာမကျန်းဖြစ်ခြင်းနှင့် အသက်သေဆုံးခြင်း
ခ) သူတစ်ပါး ပိုင်ဆိုင်မှုများ မတော်တဆဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်း
◾ အပိုင်း ၁ အရ အာမခံထားသောပစ္စည်းများကို ဆောက်လုပ်စဥ် သို့မဟုတ် တည်ဆောက်စဥ် ပျက်စီးခြင်း။
◾ လုပ်ငန်းခွင်တွင်း သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင် တွင် ပျက်စီးခြင်း။
◾ အာမခံ အကာအကွယ်ရရှိသည့် ကာလအတွင်း ပျက်စီးခြင်း။
လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်နှင့် ဆက်စပ်သူတို့၏အမည်များ
• ကိုယ်စားလှယ် ၊ ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းရှင်၊
• အတိုင်ပင်ခံ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊
ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းများ၏ စာချုပ်တန်ဖိုး
➣ ဆောက်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်များ
◾ ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ကုန်ကျစရိတ် သို့မဟုတ် ပေးသွင်းသူများ၏အလုပ်များ (ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်) များအပြင်
➣ အခွန်၊ အကောက်ခွန်တာဝန်များ
➣ အာမခံကုန်ကျစရိတ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ် များပါဝင်ပါသည်။
◾ ဆောက်လုပ်မှု / တည်ဆောက်မှု ပြုလုပ်စဥ် ကုန်ကျစရိတ် (ဥပမာ-အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်)
◾ အခြားသော ကုန်ကျစရိတ်များ (ဥပမာ-ကော်မရှင်)
➣ လုပ်ငန်းရှင်မှ ထောက်ပံ့ပေးသော လုပ်ငန်းခွင် ဝန်ဆောင်မှု ပစ္စည်းကိရိယာများ
➣ အာမခံသက်တမ်း စတင်ချိန်
◾ လုပ်ငန်း စတင်ချိန်
◾ လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ပစ္စည်းများ စတင်နေရာချထားပြီးချိန် (အာမခံထားခြင်းကိစ္စရပ်များ ပြီးဆုံးချိန်)
➣ လုပ်ငန်း ပြီးဆုံးချိန်
◾ လုပ်ငန်းရှင် (သို့မဟုတ်) အပ်နှံသူထံသို့ လုပ်ငန်း အပ်နှံသောအချိန်
◾ စာချုပ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်
၁။ ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံ အာမခံ ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
၂။ တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံ ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
၃။ မည်သည့် အာမခံ အကာအကွယ် အမျိုးအစားများရရှိနိုင်မည်နည်း။
• လုပ်ငန်းခွင်တွင်း အာမခံထားသောပစ္စည်းများ ရုတ်တရက် မမျှော်လင့်ဘဲ ဆုံးရှုံးမှုခြင်း ပျက်စီးခြင်းများအတွက် အကာအကွယ်ပေးပါသည်။
• အာမခံထားသူသည် မတော်တဆ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအား ဥပဒေအရ တရားဝင်ပေးဆောင်ရမည့် အချိန်တွင်
• အပိုင်း ၁ အရ အာမခံထားသောပစ္စည်းများကို ဆောက်လုပ်စဥ် သို့မဟုတ် တည်ဆောက်စဥ် ပျက်စီးခြင်း။
• လုပ်ငန်းခွင်တွင်း သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင် တွင် ပျက်စီးခြင်း။
• အာမခံ အကာအကွယ်ရရှိသည့် ကာလအတွင်း ပျက်စီးခြင်း။
၄။ မည်သူတို့ အာမခံထားရှိနိုင်မည်နည်း။
၅။ အာမခံထားရှိနိုင်မည့် တန်ဖိုးဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
• ဆောက်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်များ
• ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ကုန်ကျစရိတ် သို့မဟုတ် ပေးသွင်းသူများ၏အလုပ်များ (ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်) များအပြင်
• အခွန်၊ အကောက်ခွန်တာဝန်များ
• အာမခံကုန်ကျစရိတ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ် များပါဝင်ပါသည်။
• ဆောက်လုပ်မှု / တည်ဆောက်မှု ပြုလုပ်စဥ် ကုန်ကျစရိတ် (ဥပမာ-အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်)
• အခြားသော ကုန်ကျစရိတ်များ (ဥပမာ-ကော်မရှင်)
• လုပ်ငန်းရှင်မှ ထောက်ပံ့ပေးသော လုပ်ငန်းခွင် ဝန်ဆောင်မှု ပစ္စည်းကိရိယာများ
၆။ အာမခံထားရှိနိုင်မည့် ဆောက်လုပ်ရေးကာလ အပိုင်းအခြားကိုပြောပြပါ။
• အာမခံသက်တမ်း စတင်ချိန်
• လုပ်ငန်း စတင်ချိန်
• လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ပစ္စည်းများ စတင်နေရာချထားပြီးချိန် (အာမခံထားခြင်းကိစ္စရပ်များ ပြီးဆုံးချိန်)
• လုပ်ငန်း ပြီးဆုံးချိန်
• လုပ်ငန်းရှင် (သို့မဟုတ်) အပ်နှံသူထံသို့ လုပ်ငန်း အပ်နှံသောအချိန်
• စာချုပ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်
၇။ ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံ (Contractors’ All Risks – CAR) က ဘယ်လိုအာမခံ အမျိုးအစားလဲ?
ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံက ရုံးအဆောက်အဦး၊ စက်ရုံ၊ စျေးဝယ်စင်တာနှင့် လူနေအိမ်ခန်းများ​ဆောက်လုပ်စဥ် ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း၊ မော်တော်ကားလမ်း၊ မီးရထားလမ်း၊ တံတားများ၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ၊ ဆည်ကာတာများ၊ ရေပိုလွှဲများ၊ လေဆိပ်နှင့် မြေအောက် စျေးဝယ်စင်တာများ ဆောက်လုပ်ဆဲ ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
တည်ဆောက်မှုလုပ်ဆောင်နေစဥ်အတွင်း ပေါ်ပေါက်လာသော မည်သည့်ပျက်စီးမှုကိုမဆို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အခုပဲ Customer Service Hotline - 09 777 100 555 သို့ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း၊ Online Booking ဖြင့် Appointment ကြိုတင်ရယူ၍လည်းကောင်း အသေးစိတ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
၈။ တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံ (Erection All Risks – EAR) က ဘယ်လိုအာမခံအမျိုးအစားလဲ?
တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံက အမျိုးမျိုးသော စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဥ်များ လုပ်ဆောင်စဥ် ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း၊ စက်ရုံ အလုပ်ရုံများတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ဆောင်စဉ် ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း၊ တံတားနှင့် သံမဏိတာဝါတိုင်များ စသည်တို့ကို တည်ဆောက်စဥ် ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အခုပဲ Customer Service Hotline - 09 777 100 555 သို့ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း၊ Online Booking ဖြင့် Appointment ကြိုတင်ရယူ၍လည်းကောင်း၊ လူကြီးမင်း၏ ဖုန်းနံပါတ်ကို Message Box သို့ပေးပို့၍လည်းကောင်း ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်ပါတယ်။
၉။ ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံ (Contractors’ All Risks – CAR) နှင့် တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံ (Erection All Risks – EAR) တို့အတွက် ရရှိနိုင်မည့် အကာအကွယ်အမျိုးအစားများ
တည်ဆောက်မှု လုပ်ဆောင်နေစဥ်အတွင်း ပေါ်ပေါက်လာသော မည်သည့်ပျက်စီးမှုကိုမဆို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
အပိုင်း ၁ - ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်း
လုပ်ငန်းခွင်တွင်း အာမခံထားသောပစ္စည်းများ ရုတ်တရက် မမျှော်လင့်ဘဲ ဆုံးရှုံးမှုခြင်း ပျက်စီးခြင်းများအတွက် အကာအကွယ်ပေးပါသည်။
အပိုင်း ၂ - သူတစ်ပါး ထိခိုက်နစ်နာမှုဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှု
အာမခံထားသူသည် မတော်တဆ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအား ဥပဒေအရ တရားဝင်ပေးဆောင်ရမည့် အချိန်တွင်
ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံနှင့် တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံအကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိ လိုပါက အခုပဲ Customer Service Hotline - 09 777 100 555 သို့ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း၊ Online Booking ဖြင့် Appointment ကြိုတင်ရယူ၍လည်းကောင်း၊ လူကြီးမင်း၏ ဖုန်းနံပါတ်ကို Message Box သို့ပေးပို့၍လည်းကောင်း ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်ပါတယ်။
၁၀။ တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံ (Erection All Risks – EAR) က ဘယ်လိုလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်တဲ့ အာမခံတစ်ခုလဲ?
အမျိုးမျိုးသော စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ၊ စက်ရုံ အလုပ်ရုံများတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ တံတားနှင့် သံမဏိတာဝါတိုင်များ တည်ဆောက်သည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် လိုအပ်သော အာမခံ အမျိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
၁၁။ ဘယ်လိုလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံ (Contractors’ All Risks – CAR) ကို ဝယ်ယူသင့်သလဲ?
ရုံးအဆောက်အဦး၊ စက်ရုံ၊ စျေးဝယ်စင်တာနှင့် လူနေအိမ်ခန်းများ​ဆောက်လုပ်သည့် လုပ်ငန်း၊ မော်တော်ကားလမ်း၊ မီးရထားလမ်း၊ တံတားများ၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ၊ ဆည်ကာတာများ၊ ရေပိုလွှဲများ၊ လေဆိပ်နှင့် မြေအောက် စျေးဝယ်စင်တာများ ဆောက်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် တည်ဆောက်မှုလုပ်ဆောင်နေစဥ်အတွင်း ပေါ်ပေါက်လာသော မည်သည့်ပျက်စီးမှုကိုမဆို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံကို ကြိုတင်ရယူထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၁၂။ ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံ (Contractors’ All Risks – CAR) နှင့် တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံ (Erection All Risks – EAR) တို့အတွက် အာမခံထားရှိနိုင်မည့် အာမခံသက်တမ်းကာလ
လုပ်ငန်း စတင်ချိန် (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ပစ္စည်းများ စတင်နေရာချထားပြီးချိန် (အာမခံထားခြင်းကိစ္စရပ်များ ပြီးဆုံးချိန်) မှစတင်၍ လုပ်ငန်းရှင် (သို့မဟုတ်) အပ်နှံသူထံသို့ လုပ်ငန်း အပ်နှံသောအချိန် (သို့မဟုတ်) စာချုပ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော အချိန် အထိ အာမခံထားရှိနိုင်ပါတယ်။
၁၃။ ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံ (Contractors’ All Risks – CAR) နှင့် တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံ (Erection All Risks – EAR) တို့အတွက် အာမခံတန်ဖိုးကို ဘယ်လိုတွက်မလဲ?
• ဆောက်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်များဖြစ်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ကုန်ကျစရိတ် သို့မဟုတ် ပေးသွင်းသူများ၏အလုပ်များ (ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်) များအပြင် အခွန်၊ အကောက်ခွန်တာဝန်များ၊ အာမခံကုန်ကျစရိတ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်များ
• အခြားသော ကုန်ကျစရိတ်များ (ဥပမာ-ကော်မရှင်) နှင့်
လုပ်ငန်းရှင်မှ ထောက်ပံ့ပေးသော လုပ်ငန်းခွင် ဝန်ဆောင်မှု ပစ္စည်းကိရိယာများ ပေါ်မူတည်၍ အာမခံတန်ဖိုးကို တွက်ချက်ပါတယ်။
ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံ နှင့် တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံတို့အကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အခုပဲ Customer Service Hotline - 09 777 100 555 သို့ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း၊ Online Booking ဖြင့် Appointment ကြိုတင်ရယူ၍လည်းကောင်း အသေးစိတ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
• အပိုင်း ၁ – ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်း
• အပိုင်း ၂ – သူတစ်ပါး ထိခိုက်နစ်နာမှုဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှု
ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အခုပဲ Customer Service Hotline – 09 777 100 555 သို့ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း၊ Online Booking ဖြင့် Appointment ကြိုတင်ရယူ၍လည်းကောင်း အသေးစိတ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အခုပဲ Customer Service Hotline – 09 777 100 555 သို့ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း၊ Online Booking ဖြင့် Appointment ကြိုတင်ရယူ၍လည်းကောင်း၊ လူကြီးမင်း၏ ဖုန်းနံပါတ်ကို Message Box သို့ပေးပို့၍လည်းကောင်း ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်ပါတယ်။
အပိုင်း ၁ – ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်း
အပိုင်း ၂ – သူတစ်ပါး ထိခိုက်နစ်နာမှုဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှု
ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံနှင့် တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံအကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိ လိုပါက အခုပဲ Customer Service Hotline – 09 777 100 555 သို့ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း၊ Online Booking ဖြင့် Appointment ကြိုတင်ရယူ၍လည်းကောင်း၊ လူကြီးမင်း၏ ဖုန်းနံပါတ်ကို Message Box သို့ပေးပို့၍လည်းကောင်း ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်ပါတယ်။
• ဆောက်လုပ်မှု / တည်ဆောက်မှု ပြုလုပ်စဥ် ကုန်ကျစရိတ် (ဥပမာ–အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်)
• အခြားသော ကုန်ကျစရိတ်များ (ဥပမာ–ကော်မရှင်) နှင့်
ကန်ထရိုက်တာ အလုံးစုံအာမခံ နှင့် တည်ဆောက်မှု အလုံးစုံအာမခံတို့အကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အခုပဲ Customer Service Hotline – 09 777 100 555 သို့ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း၊ Online Booking ဖြင့် Appointment ကြိုတင်ရယူ၍လည်းကောင်း အသေးစိတ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။